Gigi Buffon oo ku walaacay siduu ugu cabsi qabo dhaliyaha kooxda Tottenham ee Harry Kane | Ciyaarside.com
Gigi Buffon oo ku walaacay siduu ugu cabsi qabo dhaliyaha kooxda Tottenham ee Harry Kane
Goolhayaha kooxda kubada Cagta Juventus ee Gigi Buffon ayaa Magacaabay shanta Weeraryahan ee uu ka cabsado ama ka cabsan jirey kuwaas oo uusan ku darin Xiddiga Barcelona iyo Xulka Argentina Lionel Messi.
Gigi Buffon oo kahaday kulanka koobka Horyaalada yurub ee ay la dheeli doonaan Tottenham iyo Cabsida uu ka qabo Weeraryahanka dalka England ee Harry Kane. ayaa sheegay in Xiddigaan uu yahay Weeraryahanka ugu fiican isla Markaana aan su aal laga keeni karayn qaabka layaabka leh ee uu Goolasha u dhaliyo Cabsi aad u badana uu ka qabo labada Cayaarood ee ay wada dheelayaan.
Juventus qanaaska Goolka u ilaaliya ee Gigi Buffon ayaa Magacaabay shanta Weeraryahan ee uu ugu cabsida badnaa ku dhawaad 20 kii Sano ee uu Kubada cagta kujirey kuwaas oo uu ka reebay Lionel Messi oo ka mid ah Gooldhaliye yaasha Caalamka ugu qatarsan.
Buffon ayaa Weeraryahanada uu ka cabsado ee ugu qatarta badan ka dhigay Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Inzaghi, Batistuta, isaga oo midka shanaad u soo qaatay Weeraryahanka ugu Goolasha badan Sanadkii dhamaaday ee 2017 Harry Kane. kaas oo ay Wada Cayaari doonaan laba kulan oo Wareega 16 ka koobka Champions League ah.